Burmese taste - Iora: ခရမ်းသီးနှပ်၊ ကြက်သားကြော်၊ ခရမ်းချဉ်သီးစပ်ချဉ်၊ ဂေါ်ရခါးသီးပြုတ်...ပြီးတော့ရွှေရင်အေး
ခရမ်းသီးနှပ်၊ ကြက်သားကြော်၊ ခရမ်းချဉ်သီးစပ်ချဉ်၊ ဂေါ်ရခါးသီးပြုတ်...ပြီးတော့ရွှေရင်အေး
ဒီကခရမ်းသီးတွေကရှည်တော့ အလုံးလိုက်ထက် စိပ် ပိုင်းပြီးချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ၊ ဂျင်း ကုိုကြိတ် ရင် ကြိတ်၊ ထောင်းရင်ထောင်း သုို့ လှီးရင်လည်းသေးသေးနုပ်နုပ်လေးလှီးပြီး အဆင်သင့်ပြင်ထားပါတယ်။ ဒီမှာတော့ ကြက်သွန်နီကို သေးသေးနုပ်နုပ်လှီး ပြီး ဂျင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို ညက်နေအောင်ထုထားပါတယ်။ ခရမ်းသီးက လှီးထားရင် အရောင် မဲသွားတတ်လို့ ရေဆေးပြီး လှီးပြီးတာနဲ့ချက်မဲ့အုိုးကျယ်ကျယ်ထဲကို တစ်ခါတည်း တန်းထဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ပြင်ထားတဲ့ အဆာပလာတွေထဲ့၊ ပုဇွန်ခြောက်မကြေတကြေကြိတ်ထားတာတွေနှစ်သက်သလောက်ထဲ့၊ ခရမ်းချဉ်သီးအစေ့ထုတ်ပါးပါးလှီးထားတာလေး နဲနဲထဲ့၊ ငြုတ်သီးမှုန့် ထဲ့၊ ဆီထဲ့၊ ဆားထဲ့၊ ငံပြာရည်လေးနဲနဲထဲ့၊ ရေလေးနဲနဲထဲ့ (သိပ်များများထဲ့ဘို့ မလိုပါဘူး) ပြီး အားလုံးသမသွားအောင်နယ်ပါတယ်။
ပြီးရင်တော့မီးဖုိုပေါ်မှာတယ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ခရမ်းသီးမကြေသွားအောင် ဟင်းအုိုးကို သာသာလေးမွှေပါတယ်။ ခရမ်းသီးနူးစပြုလာရင်တော့ မမွှေတော့ဘဲ အသာလေးဘဲအိုးကို လှုပ်ပေးပါတယ်။ ဆီတော်တော်လေး ပြန်ရင်တော့ နံနံပင်လေးအုပ်ပြီးချလိုက်ပါတယ်။ ကျမ ကခရမ်းသီးအိအိလေးနဲ့ သူ့ရဲ့ ခရမ်းရောင်လေးကျန်နေတာကို သဘောကျလို့ တတ်နုိုင်သမျှ အရောင်မပျောက်သွားအောင် သတိထားပြီးချပါတယ်။ တစ်ချို့ ကတော့ ခရမ်းသီးကို ဆီနဲ့ နစ်ပြီး တော်တော်အိတာကို ကြိုက်ကြပါတယ်။
ခရမ်းသီးနှပ်တော့ အမေ နဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို အရမ်းသတိရမိပါတယ်။ သူတို့ ကတော်တော် မက်မက်မောမောကြိုက်ကြပါတယ်။
ခရမ်းသီးနှပ်ရပါပြီ။ သုံးဆောင်လို့ ရပါပြီရှင်။
ကြက်သားကုို အရေခွံပါတဲ့အတုံးတွေဝယ်လာပါတယ်။ ရေဆေးပြီးတော့ ဆား၊ ငံပြာရည်၊ ခရုဆီ၊ ကြက်သားမှုန့် နဲ့ နယ်ပြီး ခဏနှပ်ထားပါတယ် အသားထဲကို အရသာဝင်အောင်လို့ ။ (ရီတော့ရီစရာနော်၊ ကြက်သားကုို ကြက်သားမှုန့် နဲ့ ပြန်နယ်ရတယ်ဆုိုတော့။ နယ်ဆုို ဒီကကြက်တွေက မြန်မာပြည်ကလုို ချိုမှမချိုဘဲကို။) ပြီးတော့ ရေ မမြုတ်တမြုတ်လေးထဲ့၊ ဆီတခါတည်း ထဲ့ ပြီးတယ်ပါတယ်။ စစချင်း အရင် ကြက်သားကို ကောင်းကောင်းကျက်အောင် မီးပြင်းပြင်းနဲ့ ပွက်ပွက်ဆူအောင်ထားပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ အပင်ကခူးထားတဲ့ Rosemary အခက်လေးကို ထဲ့၊ ကြက်သွန်ဖြူ အမွှာလိုက် နဲနဲထုထားတာကုို ထဲ့ပါတယ်။ (ဒါထဲ့တာ ကတော့ ကျမကို သိပ်ချစ်တဲ့ အမေရိကန် သူငယ်ချင်းမမကြီးရဲ့ နည်းပါ။ သူတို့ စုံတွဲ ကကျမကိုသိပ်ချစ်ပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့country home လေးကိုခေါ်သွားတိုင်း ကြက်သားကုို Rosemary ထဲ့ ပြီး roast လုပ်ကျွေးပါတယ်။ သူကတော့ အာလူးတို့ ၊ ကြက်သွန်နီတို့ စိပ်ပြီးထဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီ country home လေးမှာ ရခဲ့တဲ့ အပျော်လေးတွေနောက်တော့ မျှဝေပါဦးမယ်) ပြီးမှ မီးလျှော့ ပြီးနူးတဲ့ထိ တယ်ပါတယ်။ ရေကုန် ပြီးဆီစပြန်တာနဲ့ ကြက်သားတွေကို ထက်အောက်လှန် ပြီးမွှေပေးပါတယ်။ တော်တော်လေး ကြာတော့ စပြီးကျွမ်းစပြုပြီး ကြက်သားကြော် နံ့ လေးကမွှေးတက်လာပါတယ်။ အရေခွံ ပါလုို့ ဆီမပေါက်အောင်တော့ သတိထားရပါတယ်။ ဆီမပါအောင် ပန်းကန်ထဲကို ခပ်ထဲ့ထားလိုက်ပါတယ်။ စားချင်တဲ့ အခါကျရင် ကြက်ကြော်ဆီ လေးဆမ်းစားချင် ရင်စားပါတယ်။ အခုတော့ ခရမ်းသီး နှပ် နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးစပ်ချဉ်ပါနေတော့ စားဖြစ်ပါ့မလားမသိပါဘူး။
ခရမ်းချဉ်သီးနုပ်နုပ်လှီးထားတာတွေ ကုို ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် ၊ ဆီ ပါလေကာလေး နဲ့ ဆားထဲ့ ပြီးလုံးချက်ချက်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးကို ကုယ့် စိတ်ကြိုက် အချိန်ရသလုို ခြေပါတယ်။ အပေါ့အငံ မြည်းပြီး ငံပြာရည် လေးလည်းထဲ့ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် အရသာရအောင် ချခါနီးမှာ ငြုတ်သီးစိမ်းတွေ ညှပ်ထဲ့ ပါတယ်။ ပြီးတော့ နံနံ၊ ပင်စိမ်း၊ ရှမ်းနံနံ အဆင်သင့်ရှိတာ ထဲ့ပါတယ်။ အားလုံး နဲ့ လိုက်ပါတယ်။ ထမင်းထဲ ဆမ်း ပြီး ကြက်သားကြော်လေး နဲ့ တွဲစားလို့ ကောင်းပါတယ်။ ဆောင်းတွင်း ခရမ်းချဉ်သီးပေါတဲ့ အချိန်ဆုို အမေက ဒီလိုခဏခဏချက်ပါတယ်။
အားလုံးကျက်တော့ ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူထဲ ကို ဂေါ်ရခါးသီးစိပ်ထားတာလေးတွေ ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးစပ်ချဉ် နဲ့ ကိုက်စားရအောင်လို့ ပါ။ သိပ်မပျော့ ခင် ရေအေးလေး နဲ့ ဆေးပြီး ခပ်ထားပါတယ်။
ဒါကတော့ Rosemary အခက်လေးပါ။
ရွှေရင်အေး လာပါပြီ။ အချိုတည်းဘို့ ။
ရွှေရင်အေးသာခေါ်လိုက်တာ။ တကယ်တော့ မစစ်ဘူး။ ဒီရက်တွေအတွင်း မိုးတွေကရွာ ပြီး အရမ်းချမ်းနေချိန်မှာ ကိုယ် က ရွှေရင်အေးတအားစားချင်စိတ်ပေါက်နေတယ်။ ဒါနဲ့ဗီယက်နမ် ကလာတဲ့ မျှော့ချောင်း ရယ်၊ သာကူရယ်ကို ကျို ပြီးရေအေးနဲ့ ဆေးထားလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တနေ့ ကရွှေတောင် ခေါက်ဆွဲလုပ်စားတုန်း ကကျန်တဲ့ အုန်းနုို့ ဘူးတ၀က်ကို သကြားနဲ့ ကျိုလိုက်ပါတယ်။ Vanilla နံ့ အရည် တစက်လောက်ထဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ carnation coffee mate powder ကို ထဲ့လိုက်ပါတယ်။ ဆားလေးပါးပါးလေးထဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ စားမဲ့ ခွက်ထဲမှာ အားလုံးရောပြီး ထဲ့စားပါတယ်။
ဒါက ဒူရင်းသီး မကြိုက်သူများ အတွက်.....
ဒါကတော့ ဒူရင်းသီး ကြိုက်သူများအတွက်......
ဒါက ညဘက်က ပေါင်မုန့် ထဲ့စားထားတာပါ။ ရွှေရင်အေးနဲ့ တူအောင်လို့ .....
ပြီးတော့ ရေခဲမုန့် လည်းထဲ့စားလိုက်ပါသေးတယ်။ ဖာလူဒါ မဟုတ် ရွှေရင်အေးမဟုတ်.. နံမယ်တစ်ခုတော့ ပေးဘို့ လို နေပြီ။ လွယ်ပြီး စားလို့ အရမ်းကောင်းတော့လုပ်စားဖြစ်ဦးမှာသေချာပါတယ်။ နံမည်လေးပေးသွားပါဦးနော်။ သုံးလည်းသုံးဆောင်ရင်းပေါ့။
ရောက်လာသူများ သုံးဆောင်သွားပါဦးနော်။ ကျေးဖူးတင်ပါတယ်။
အမှားပြင်ဆင်ချက်။ ။carnation အစား Nestle ဟုပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပါရန်။ carnation ကရန်ကုန်မှာ သုံးတာဘဲ။ အဲဒါသာကြည့်တော့၊ ကုိုယ်စီးတဲ့ မြင်းအထီးမှန်းမသိ အမမှန်းမသိ ဆိုတာ တယ်မှန်သကိုး။ (ပုံစံနဲ့ အရသာကတော့တူတူပါဘဲ) စောဒကတက်သည်ဟုမှတ်။
Posted by Iora at 1:56 AM
Labels: Chicken, Desserts, Veggie
ညီလင်းသစ် March 3, 2011 at 5:33 AM
Friends get closer ဆိုတော့ ရွှေရင်အေးက သူငယ်ချင်းတွေကို ပိုပြီး ရင်းနှီး စေတာလားလို့ တွေးနေတာ....၊း)
ခရမ်းချဉ်သီးဟင်းထဲမှာ ငရုတ်သီးတွေ တွေ့လိုက်လို့ သွားရည်ကျသွားတယ်..။
Anonymous March 3, 2011 at 5:43 AM
I'll try your rosemary added chicken.Shweyinaye brings thingyan fragrance to me.We still have cold temp.
Iora March 3, 2011 at 4:30 PM
May be it is true because we Burmese usually offer the Shweyinaye to our friends and neighbors. right?
ဆိုတော့..သေချာပါတယ်။ ပိုရင်းနှီးစေတာ။ နော်? :D
ကိုညီလင်းသစ်လည်း အစပ်ကြိုက်သလား? ကျမကတော့ အစပ်မပါရင် ထမင်းပွဲ ကမပြည့်စုံသလိုဘဲ။
Rosemary smells so sweet. Even when you touch it, its smell stays on your fingers.
Yeah, still cold but I wanna try another shweyinaye with ohnoh kyauk kyaw..:DDD
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 3, 2011 at 8:53 PM
Rosemary က ဒီမှာ မရှိဘူး တအားစိတ်ဝင်စားတာဘဲ
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တော့ မျိုးစေ့ထုတ်လေး ပို့ပေးထားတယ်
စိုက်နည်းကိုသေချာ လေ့လာကြည့်ပြီးမှ စိုက်ကြည့်ပါဦးမယ်..
သူ့အနံ့လေး ဘယ်လိုနေမယ်ဆိုတာ တွေးပြီးစိတ်ဝင်စားနေမိတာ
ခရမ်းချဉ်သီး စပ်ချဉ်လဲဆိုရော တံတွေးတွေ ပါးစပ်ထဲပြည့်လာတယ်း)
KhinU Khine March 4, 2011 at 5:34 AM
thanks for sharing the dishes and dessert. how do u boil the tapioca sticks. do you need to soak in water before you boil and how long? please let me know. thanks.
Iora March 4, 2011 at 9:29 PM
I don't soak the tapioca stick in water before boiling but after. I don't follow the direction from the package.I just taste and check the color. When the color of the whole stick turns to transparent color I rinse it with the cold water and soak it in the water forawhile. After that, I drain it and serve with the coconut milk cooked. I think, it also depends on the brand as they come with various brands.
Iora March 5, 2011 at 11:45 AM
Rosemary ကကြည့်ရတာတော့ အကြမ်းခံပုံဘဲ။ ချုံပင်လိုမျိုးဆုိုတော့လေ။
သု့ အနံ့ ကအရမ်းမွှေးတယ်။ မခူးဘဲ ကုိုင်လိုက်ရင်တောင် လက်မှာစွဲနေတယ်။ ချောရဲ့ comments လေးကို ပြန်ရေးပြီးပြီဘဲမှတ်နေတာ။ ခုမှ..စိတ်ထဲကပြန်ထားမှန်းသိတော့တယ်။ comments ကများလွန်းတော့လေ..ဟင်းဟင်းဟင်း..
ဒါနဲ့ဗီယက်နမ် ကလာတဲ့ မျှော့ချောင်း ရယ်၊ သာကူရယ်ကို ကျို ပြီးရေအေးနဲ့ ဆေးထားလိုက်ပါတယ်
(သိတ်မရှင်းဘူး. ဒီက ချာတယ်။)
Iora March 5, 2011 at 11:13 PM
အင်း...မျှော့ချောင်းနဲ့ သာကူကကျိုလိုက်တော့ကော်လိုမျိုးနဲနဲစေးသွားတယ်လေ။ရန်ကုန်ကလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ (ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရတာတွေကကုိုယ်ဘဲလုပ်နေမကျလို့ လားတော့မသိဘူး။) အဲဒီတော့ ရေအေးနဲ့ကြာကြာလေးဆေးလိုက်တော့မှ ချောပြီးသွက်သွားတယ်လေ။ ပြီးတော့မှ အဲဒါတွေကို အုန်းနုို့ နဲ့ ရောပြီးထဲ့စားတာပါ။
Iora March 6, 2011 at 9:31 AM
Ms Kom..ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ ကျိုတယ်ဆုိုလို့ မရှင်းတာထင်တယ်။ ဒါဆုို ပြုတ်တယ်ဆိုရင်ကော? သာကူတို့ ဘာတုို့ ကိုပြုတ်တယ်လို့ လည်းမသုံးသလိုဘဲ။
Sunny March 15, 2011 at 1:28 PM
အရမ်း အရမ်းကို စားချင်သွားပါပြီရှင်..
Iora March 16, 2011 at 1:40 AM
KhinU Khine April 5, 2011 at 7:58 AM
Iora, thanks for answering my request.
Iora April 5, 2011 at 11:41 PM
KhinU Khine April 6, 2011 at 5:47 AM
Hi Iora, where are you in US. I'm in Long Island, New York. thanks